Barcelona Oo Heshiis Hordhac Ah La Gaartay Xavi-ga Afrika, Ozil Oo Go’aansaday Inuu Isaga Tago Arsenal & Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Arbaco Ah - Laacib.net
Barcelona Oo Heshiis Hordhac Ah La Gaartay Xavi-ga Afrika, Ozil Oo Go’aansaday Inuu Isaga Tago Arsenal & Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Arbaco Ah
by Saed Balaleti | Wednesday, Sep 13, 2017
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah ee aan idin kula socodsiino wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ay qoreen wargeysyada Ingariiska ka soo baxa.
Roy Hodgson ayaa iska diiday labo dalab oo waa weyn uu ka helay Shiinaha madaama uu mar walba aaminsanaa inuu fursad u heli doono inuu mar kale ka shaqeeyo kubada cagta Ingariiska isagoo haatan noqday tababaraha Crystal Palace.
Neymar ayaa diiday inuu salaamo da’ yarka Celtic Anthony Ralston ka dib markii ay isku dhaceen intii ay socotay ciyaartii ay xalayto PSG ku badisay 5-0.
William Carvalho ayaa weli doonaya inuu u wareego West Ham inkastoo uu gabi ahaanba burburay xiriirkii u dhaxeeyay West Ham iyo kooxdiisa haatan ee Sporting Lisbon.
Harry Kane ayaa sheegay inuu heysto lix kulan oo uu ku cadeeyo inuu yahay in xiddig weyn ka hor kulanka ay Tottenham ku furaneyso caawa xilli ciyaareedkeeda Champions League ee ay la ciyaarayaan Borussia Dortmund.
Barcelona ayaa heshiis ka gaartay inay bisha Janaayo la soo wareegto xiddiga khadka dhexe ee Nice Jean Michael Seri kaasoo lagu naaneeso Xavi-ga Afrika ka dib markii ay ku hungoobeen saxiixa Philippe Coutinho.
Warar ka imaanaya Jarmalka ayaa sheegaya in Mesut Ozil uu diyaar u yahay inuu si xor ah uga tago Arsenal marka uu qandaraaskiisa dhaco xagaaga danbe.
Agaasimaha kooxda RB Leizpig ninka lagu magacaabo Oliver Mintzlaff ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga diirada u saaran Liverpool iyo Real Madrid Timo Werner inuusan laheyn lacag lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Xiddiga diirada u saaran Arsenal Karim Benzema ayaa ku dhow inuu qandaraas qaali ah oo cusub u saxiixo Real Madrid iyadoo lacagta lagu burburinayo qandaraaskiisa cusub laga dhigi doono 900 milyan ginni.
Goolhayaha kooxda Cologne, Tom Horn, ayaa shaaca ka qaaday inuu iska diiday fursad uu ugu biiro Liverpool markii uu yaraa sababtoo ah ayuu yiri Germany ayaa dhanka aqoonta goolhaye kaga fiican England.
Xiddiga Juventus Paulo Dybala ayaa si maldahan u sheegay inay macquul tahay inuu Lionel Messi kula biiro Barcelona ka dib markii uu diiday inuu meesha ka saaro inuu ka tagayo Juve.
Gareth Bale ayaa qirtay inay adag tahay inuu naftiisa koontaroolo haddii uu goolka guusha ka dhaliyo kooxdiisa hore ee Tottenham marka ay isku arkaan wareega group-yada ee Champions League.
Weeraryahanka Chelsea Diego Costa ayaa rajeynaya in kooxda ay soo gabagabeyso wadahadalada uu ugu wareegayo Atletico Madrid dhamaadka isbuucaan.
Demarai Gray ayaa ku dhow inuu qandaraas cusub u saxiixo Leicester City taasoo cadeyneysa sida ay kooxda kalsooni ugu qabto weeraryahanka da’da yar.
Sevilla ayaa diyaar u ah inay talaabo dhanka sharciga ah ka qaado Atletico Madrid oo ku aadan heshiiska weeraryahan Vitolo.
Mohamed Salah ayaa sheegay in asxaabtiisa Liverpool ay u noqdeen sida qoyskiisa oo kale.
Arsenal ayaa wadahadalo qandaraas kordhin ah la yeelanin xiddiga khadka dhexe Mesut Ozil tan iyo bishii Febraayo. 28 jirkaan Jarmalka ayaa 10 bilood ay kaga harsan tahay qandaraaskiisa haatan ee Gunners.
Weeraryahanka Chelsea Diego Costa oo 28 sanno jir ah ayaa ugu danbeyn ka tagay Brazil, waxaana uu gaaray Madrid si uu u dhameystiro heshiiska uu dib ugu laabanayo Atletico Madrid.